3D ပရင်တာ အပိုပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်း | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဣဇာက်သည် | 29/03/2022 09:00 | ပုံနှိပ် 3D
3D ပရင်တာများသည် အခြားသော စက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ပြဿနာများနှင့် ကွဲအက်မှုများ ရှိနေသောကြောင့် ပြဿနာများ၏ အသွင်အပြင်ကို နှောင့်နှေးစေရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေကို သိရှိရန် သင့်လျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းကို သိထားသင့်သည်။ 3D ပရင်တာများအတွက် ကွဲအက်ခြင်းနှင့် အပိုပစ္စည်းများအတွက် ဖြေရှင်းချက် ပျက်စီးနေသော ဒြပ်စင်ကို လိုအပ်သည့်အခါ အစားထိုးရန် သင့်တွင် သင့်တွင်ရှိသည်။ ဤတိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် သင်သင်ယူရမည့်အရာများ။
* အရေးကြီးသော ကြေငြာချက်: များစွာရှိပါသည် 3D ပရင်တာ အမျိုးအစားများထို့ကြောင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြုပြင်သည့်အခါ ၎င်းတို့ကြားတွင် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အချို့သော ပရင်တာများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးမှုများရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မသိသောအခါ၊ သင်၏ သီးခြားစက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်လ် သို့မဟုတ် သင့်ပရင်တာအမှတ်တံဆိပ်၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်ကို ကိုးကားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အထူးသဖြင့် အိမ်သုံး ပရင်တာများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Bresser - Boquilla... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Iverntech V5 Extrusor... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HENTEK extruder အပူပေးစက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
bisophice anet 2pcs/set... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Bresser - Boquilla...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Iverntech V5 Extrusor...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	HENTEK extruder အပူပေးစက်...
1 3D ပရင်တာများအတွက် အကောင်းဆုံးအပိုပစ္စည်းများ
1.1 Brackets / Carriage Plate
1.3 ကပ်ငြိမှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားရန် PEI စာရွက်
1.7 Extruder သို့မဟုတ် hotend
1.9 PTFE ပြွန်
1.10 pneumatic ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
1.11 3D ပရင်တာအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
1.15 bearing သို့မဟုတ် bearing
1.18 FEP စာရွက်
1.21 LCD မျက်နှာပြင်
1.24 အပိုပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများ
1.24.1 ခုံဖိနပ် Nozzle Cutter Kit
1.24.2 ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးကိရိယာအစုံ
1.24.3 အစေးအတွက် လမ်းကြောင်းများနှင့် ဇကာများ
1.24.4 ခြောက်သွေ့ပြီး ဘေးကင်းသော ချည်မျှင်များကို သိမ်းဆည်းပါ။
2 3D ပရင်တာများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
2.1 အိပ်ရာကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိခြင်း။
2.3 ကောင်းသော ကပ်ငြိမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
2.4 Timing Belt Tension ချိန်ညှိမှု
2.7 Filament ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
2.8 Nozzle အစားထိုးခြင်း။
2.10 ပြင်ပသန့်ရှင်းရေး (အထွေထွေ)၊
2.12 အစေးကို သန့်စင်ပါ။
2.13 3D ပရင်တာ ဖာမ်းဝဲလ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
3 အဖြစ်များသော 3D ပရင်တာ ပြဿနာများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလမ်းညွှန်
3.1 ကျွန်ုပ်၏ 3D ပရင်တာသည် အဘယ်ကြောင့် ပရင့်ထုတ်ခြင်း မပြုသနည်း။
3.2 နော်ဇယ်သည် အိပ်ရာနှင့် မသင့်လျော်သောအကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည်။
3.3 Filament ကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပိုင်းများပျောက်ဆုံးခြင်း။
3.4 ပရင်တာသည် ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းကို အလယ်တွင်ထားခဲ့သည်။
3.5 အသေးစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပုံနှိပ်မထားပါ။
3.6 အစိတ်အပိုင်း၏ တွယ်တာမှု အားနည်းခြင်း။
3.7 နောက်ဆုံးအလွှာရှိ အပေါက်များ
3.8 အစိတ်အပိုင်း၏ အလွှာများ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် မဖြည့်ထားသော ပျက်ပြယ်မှုများ
3.9 Extruder မော်တာ အပူလွန်ကဲခြင်း။
3.10 ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်း- အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
3.11 ကြိုးတပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျော့တော့သော 3D ပရင်တာပြုပြင်ခြင်း။
3.12 နော်ဇယ် ပိတ်ဆို့နေသည်။
3.13 အလွှာပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အလွှာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
3.15 ပိုလျှံနေတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို တစ်စက်ပုံစံနဲ့
3.17 extrusion အောက်မှာ
3.21 ပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် အပူလွန်ကဲခြင်း။
3.22 resin curing တွင် delamination
3.23 အစေးပုံနှိပ်စက်တွင် ဖုန်စုပ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း။
3.24 မဖွံ့ဖြိုးသေးသော စရိုက်
3.25 အပေါက်များ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်မှုများ
3.26 ပထမအလွှာတွင် အက်ကြောင်းများပေါ်လာသည်။
3.28 ကြမ်းတမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖု
3.30 အစေး 3D ပရင်တာတွင် ကပ်ငြိမှု မရှိခြင်း။
3.31 ပုံနှိပ်စက်ပေါ်တွင် ပုံသဏ္ဌန်များ (အစေး 3D ပရင်တာ)
3.32 အဆင့်လိုက်ဝက်အူသည် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
3.33 3D ပရင်တာ အမှားကုဒ်များကို ဘာသာပြန်ပါ။
3D ပရင်တာများအတွက် အကောင်းဆုံးအပိုပစ္စည်းများ
ဤတွင်အချို့ 3D ပရင်တာများအတွက် အပိုပစ္စည်းများ အကြံပြုချက်များ ၎င်းတို့အားလုံးသည် မည်သည့် 3D ပရင်တာမော်ဒယ်နှင့်မဆို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း သင့်အား လမ်းပြရန်-
Brackets / Carriage Plate
Zeberoxyz Modular Kit... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Kits အတွက် အဆင့်မြှင့်ပါ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ပန်းကန်ပြား၊ ပန်းကန်ပြား... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Befenybay အပ်ဒိတ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Zeberoxyz Modular Kit...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Kits အတွက် အဆင့်မြှင့်ပါ...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	ပန်းကန်ပြား၊ ပန်းကန်ပြား...
Sovol Creality Ender 3... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
သံလိုက်အိပ်ရာဟောင်း စိတ်ကူး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Creality Ender3အိပ်ရာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
စိတ်ကူးဟောင်း PEI 220x220... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Sovol Creality Ender 3...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	သံလိုက်အိပ်ရာဟောင်း စိတ်ကူး...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Creality Ender3အိပ်ရာ...
စိတ်ကူးဟောင်း PEI 220x220...
ကပ်ငြိမှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားရန် PEI စာရွက်
PEI စာရွက် 235x235mm၊ အိပ်ရာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Toaiot စနစ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HICTOP ပလပ်ဖောင်း... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	PEI စာရွက် 235x235mm၊ အိပ်ရာ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	စိတ်ကူးဟောင်း PEI 220x220...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Toaiot စနစ်...
3Dman Heatbed Silicone... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
YIXISI စမ်းရေ ၄ ချပ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အိပ်ရာအစိတ်အပိုင်းများ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Furiga ကော်လံ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	3Dman Heatbed Silicone...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	YIXISI စမ်းရေ ၄ ချပ်...
BIGTREETECH SKR ၃ပြား... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
BIGTREETECH ရေဘဝဲ V1.1... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Controller Board MKS... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
တရားဝင် Creality Ender 3... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	BIGTREETECH SKR ၃ပြား...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	BIGTREETECH ရေဘဝဲ V1.1...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Controller Board MKS...
တရားဝင် Creality Ender 3...
Thermal Paste ကို နှစ်သက်သည် ..။ အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ငွေ Qiu... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Easycargo အပူခံငါးပိ၊... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Mars ဂိမ်း MT1၊ ခေါက်ဆွဲ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Thermal Paste ကို နှစ်သက်သည် ..။
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	ငွေ Qiu...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Easycargo အပူခံငါးပိ၊...
Mars ဂိမ်း MT1၊ ခေါက်ဆွဲ...
Extruder သို့မဟုတ် hotend
JHead V6 Hotend Sets ၊ Kit... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Extrusion Head Kit... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
LICHIFIT Head Kit အတွက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HUSZZM E3D V6 Kit J-Head... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	JHead V6 Hotend Sets ၊ Kit...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Extrusion Head Kit...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	LICHIFIT Head Kit အတွက်...
3D ပရင်တာ နော်ဇယ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SIENOC ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Haisheng 5PCS နော်ဇယ်များ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Extruder Nozzle MK8... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	3D ပရင်တာ နော်ဇယ်...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	SIENOC ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာ...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Haisheng 5PCS နော်ဇယ်များ...
Extruder Nozzle MK8...
1 m longitud2mm ID... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SIENOC 2x 1M PTFE Teflon... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Capricorn Bowden Tube... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SIQUK5Pieces Tube... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	1 m longitud2mm ID...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	SIENOC 2x 1M PTFE Teflon...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Capricorn Bowden Tube...
SIQUK5Pieces Tube...
Wendry ချိတ်ဆက်ကိရိယာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SCARF 3Pcs ပရော်ဖက်ရှင်နယ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
YOTINO 10 Pieces PC4-M6... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
UniTak3D 8Pcs PC4-M10... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Wendry ချိတ်ဆက်ကိရိယာ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	SCARF 3Pcs ပရော်ဖက်ရှင်နယ်...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	YOTINO 10 Pieces PC4-M6...
3D ပရင်တာအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
Quimat 2pcs MOSFET... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ZHITING အသေးစား မော်ဂျူး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
DollaTek မော်ဂျူး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ARCELI မော်ဂျူး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Quimat 2pcs MOSFET...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	ZHITING အသေးစား မော်ဂျူး...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	DollaTek မော်ဂျူး...
Creality Stepper Motor... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
AZDelivery CNC Shield V3... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
TEECNOIOT5ချပ် ထုပ်ပိုး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
6 unids 1.5M/5ft motor... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Creality Stepper Motor...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	AZDelivery CNC Shield V3...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	TEECNOIOT5ချပ် ထုပ်ပိုး...
DollaTek5မီတာ6မီလီမီတာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
QWORK 5Pcs Correas... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SCARF® 10Pcs ပရီမီယံ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SPTwj5မီတာ 3D... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	DollaTek5မီတာ6မီလီမီတာ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	QWORK 5Pcs Correas...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	SCARF® 10Pcs ပရီမီယံ...
SPTwj5မီတာ 3D...
ခါးပတ် Pulleys... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Fafeicy 20/60 သွားများ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Dadabig 8Pcs 3D ပရင်တာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	ခါးပတ် Pulleys...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	ခါးပတ် Pulleys...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Fafeicy 20/60 သွားများ...
Dadabig 8Pcs 3D ပရင်တာ...
bearing သို့မဟုတ် bearing
Ruesious 20 x Bearings... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
3D FREUNDE မူရင်း Igus... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Pulley bearings အတွက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Ruesious 608ZZ -... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Ruesious 20 x Bearings...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	3D FREUNDE မူရင်း Igus...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Pulley bearings အတွက်...
Vipxyc အပူစုပ်ခွက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အလွယ်4ထုပ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Jopto4Accesorios de... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Jopto4ဆက်စပ်ပစ္စည်း... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Vipxyc အပူစုပ်ခွက်...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	အလွယ်4ထုပ်...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Jopto4Accesorios de...
Jopto4ဆက်စပ်ပစ္စည်း...
RUNCCI-YUN ၃ခု... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အအေးခံပန်ကာ4လုံး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HAWKUNG2Pice ပရင်တာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Bigxin 4Pcs Fan... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	RUNCCI-YUN ၃ခု...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	အအေးခံပန်ကာ4လုံး...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	HAWKUNG2Pice ပရင်တာ...
Bigxin 4Pcs Fan...
ခွဲထွက်ရုပ်ရှင်များ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
FEP အများဆုံးရုပ်ရှင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
5 Pieces FEP ရုပ်ရှင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ELEGOO 5PCS FEP ရုပ်ရှင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	FEP အများဆုံးရုပ်ရှင်...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	5 Pieces FEP ရုပ်ရှင်...
ELEGOO 5PCS FEP ရုပ်ရှင်...
Furiga ချောဆီ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Bisofice2Pieces စူပါ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၃ ယောက်ထဲမှာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Furiga အသုံးအဆောင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Furiga ချောဆီ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Bisofice2Pieces စူပါ...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၃ ယောက်ထဲမှာ...
ARCELI ARTCI အပူထိန်းစက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SOOWAY6ခု6x 20... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HICTOP အာရုံခံကိရိယာ/ အပူချိန်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အင်ဂျင်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	ARCELI ARTCI အပူထိန်းစက်...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	SOOWAY6ခု6x 20...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	HICTOP အာရုံခံကိရိယာ/ အပူချိန်...
5,5" LCD မျက်နှာပြင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
KOYOFEI 5PCS Protector... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ELEGOO LCD Monochrome... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Bisofice ၏အစိတ်အပိုင်းများ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	5,5" LCD မျက်နှာပြင်...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	KOYOFEI 5PCS Protector...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	ELEGOO LCD Monochrome...
DSNTERED 16 ရောင် LED... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Creality Halot One... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SouiWuzi မီးဘုတ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Obelunrp မီးဘုတ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	DSNTERED 16 ရောင် LED...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Creality Halot One...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	SouiWuzi မီးဘုတ်...
Creality Resin Tank... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Frame Resin Tank... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Okuyonic အစေးအပေါက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Okuyonic Resin Tank... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Creality Resin Tank...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Frame Resin Tank...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Okuyonic အစေးအပေါက်...
Okuyonic Resin Tank...
ခုံဖိနပ် Nozzle Cutter Kit
သိကောင်းစရာများ စိတ်ညစ်စရာများ extrusion nozzle တွင်၊ အတားအဆီးများ သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည့် အစိုင်အခဲအချည်အနှောင်များ ဖြစ်နိုင်သော အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
Voarge Power Drill Kit... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Sunreek - အကြံပြုချက်အစုံ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Vbestlife အပ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	SIENOC ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Voarge Power Drill Kit...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Sunreek - အကြံပြုချက်အစုံ...
အလုပ်များကို ကူညီပေးမည့် ကိရိယာအစုံ သန့်ရှင်းရေး၊ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း။ သင်၏ 3D ပရင်တာ၏
42PCS ပရင်တာအစုံ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
SOOWAY 36pcs Kit... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
OLYCRAFT 23PCS 3D... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HAWKUNG 35 Pieces Kit ၏... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	42PCS ပရင်တာအစုံ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	SOOWAY 36pcs Kit...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	OLYCRAFT 23PCS 3D...
HAWKUNG 35 Pieces Kit ၏...
အစေးအတွက် လမ်းကြောင်းများနှင့် ဇကာများ
၏ကိရိယာ အစေးကိုလောင်းရန် funnels နှင့် filter များ အစိုင်အခဲအမှုန်များကိုဖယ်ရှားပါ။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပရင်တာသိုက်များတွင် ထည့်ရန်နှင့် သိမ်းဆည်းလိုပါက ၎င်းကို သင်္ဘောသို့ ပြန်ပို့ပေးရန် ၎င်းတို့က သင့်အား ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
JOREST7Pieces Printer... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Sovol 3d ပရင်တာအစေး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
3D ပရင်တာအစေး... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ManLee 102pcs ရေစစ်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	JOREST7Pieces Printer...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Sovol 3d ပရင်တာအစေး...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	3D ပရင်တာအစေး...
ManLee 102pcs ရေစစ်...
ခြောက်သွေ့ပြီး ဘေးကင်းသော ချည်မျှင်များကို သိမ်းဆည်းပါ။
သင့်တွင် စပူးများနှင့် အမြောက်အမြားရှိသောအခါတွင် စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များမပါဘဲ အမျှင်များကို သိမ်းဆည်းရန် ဖုန်စုပ်အိတ်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်သည် ၎င်းတို့ကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးမပြုပါ။. အစေး၏ကိစ္စတွင်၊ ၎င်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိုးထဲတွင်သိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
eSUN ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ 10... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
eSUN 15 Pieces ပရင်တာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HAWKUNG 10 Pieces 3D... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	eSUN ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ 10...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	eSUN ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ 10...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	eSUN 15 Pieces ပရင်တာ...
HAWKUNG 10 Pieces 3D...
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိုထိုင်းဆသည် အမျှင်များကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် အခြောက်ခံသေတ္တာများ ရောင်းချရခြင်းသည် သင်၏ အမျှင်များ ၏ ကောင်းမွန်သော "ကျန်းမာရေး" ကို ပြန်လည်ရရှိစေပြီး စိုစွတ်သော ချည်မျှင်များကို သက်သာစေပါသည်။
eSUN eBox Lite Box... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Sovol Tumble Dryer Box... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အခြောက်ခံဘောက်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	eSUN eBox Lite Box...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Sovol Tumble Dryer Box...
3D ပရင်တာများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
အိမ်မြောင်။ ရေးသားသူ- Stemfie3D
အိမ်မြောင်။ ရေးသားသူ: paulo@kiefe.com
ချောဆီ။ ရေးသားသူ: paulo@kiefe.com
ချိန်ညှိခြင်းနှင့် စနစ်ထည့်သွင်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် အပိုင်း မအောင်မြင်ပါ။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် ပြုပြင်ခြင်းထက် အမြဲကောင်းသည်။ အဲဒါကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ 3D ပုံနှိပ်စက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါ။. လုံလောက်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သောပြဿနာများကို ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် 3D ပရင်တာအား ထိန်းသိမ်းရန် အားထုတ်မှုသည် ရေရှည်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ငွေကြေးချွေတာမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
*အရေးကြီးသည်မှတ်ချက်- မှန်ကန်သော ကိုင်တွယ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် 3D ပရင်တာပါလာသော လက်စွဲစာအုပ်ကို အမြဲဖတ်ပါ။ သင့်တွင် ဤလက်စွဲစာအုပ်မရှိပါက၊ သင့်မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် PDF ဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဓာတ်လိုက်မှုမဖြစ်စေရန် 3D ပရင်တာအား ပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အများစုကို လုပ်ဆောင်သင့်ပြီး extruder ကို အပူပေးရမည့်အချိန်ကဲ့သို့သော မဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ သင့်ကိုယ်သင် မလောင်ကျွမ်းစေရန် အထူးသတိထားပါ။
အိပ်ရာကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိခြင်း။
အိပ်ရာကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားပါ။ ဦးစားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သင့်သည်။ အချို့သော 3D ပရင်တာများတွင် အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် တစ်ပိုင်းအလိုအလျောက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ပရင်တာ၏ ထိန်းချုပ်မီနူးမှ) ပါ၀င်သောကြောင့် ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။ သို့သော် မပါဝင်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ ပျော့ပြောင်းခြင်း၊ မညီညာသော ပထမအင်္ကျီများ၊ သို့မဟုတ် ကပ်တွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းကို ကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိရပါမည်။
အဆင့်မတင်မီ ကုတင်၏မျက်နှာပြင်သည် အလွန်သန့်ရှင်းကြောင်း သေချာစေရန် အရေးကြီးပြီး တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါက ပိုကောင်းပါသည်။ အခုလဲ ပူတယ်။. ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အပူချိန်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို မှားယွင်းစွာ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်သည် အအေး သို့မဟုတ် ပူသော ချိန်ကိုက်ခြင်းကြားတွင် များစွာကွာခြားချက်ကို သင်သတိပြုမိမည်မဟုတ်ပေ။
အတွက် manual အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ ပရင်တာများ၏ အောက်ခြေတွင် အများအားဖြင့် ပါရှိသည့် ဘီးများ သို့မဟုတ် ချိန်ညှိမှုဝက်အူများကို အသုံးပြုရပါမည်။ ၎င်းတို့ကို ထောင့်များကို မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချပြီး အဆင့်ထားရန် ၎င်းတို့ကို တစ်ဖက်သို့ ရွှေ့ရန်သာ လိုအပ်သည်။ အချက် ၅ ချက်၊ လေးထောင့်နှင့် အလယ်ကို ကိုးကားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွှာများသည်5မီလီမီတာဖြစ်ပါက၊ နေရာအားလုံးရှိ extruder nozzle နှင့် bed အကြားအကွာအဝေးသည် 0.2 နှင့် 0.1 mm ကြားရှိသင့်သည်။
အသုံးပြုသူအချို့က သုံးသည်။ လှည့်ကွက် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက်၊ ၎င်းသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ပရင့်ထုတ်ရန် ပရင်တာအား ထားရှိရန်နှင့် ပထမအလွှာကို ပရင့်ထုတ်စဉ်တွင် အမြန်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးအထိ လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ၎င်းတို့သည် အလွှာ၏ မညီမညာသော အထူများကို စစ်ဆေးပြီး အဆင့်ရောက်သည်အထိ အိပ်ရာကို ကိုယ်တိုင် အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။
အိပ်ရာကို အဆင့်လိုက်လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်၊ ပထမဆုံးစတင်ချိန်တွင်၊ နိုင်လွန် သို့မဟုတ် ပိုလီကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့သော မြင့်မားသောကျုံ့သွားသည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ သို့မဟုတ် PEI စာရွက်များကို တပ်ဆင်သည့်အခါ။
၎င်းကို ပရင်တာကိုယ်တိုင်၏ အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြု၍ အလွယ်တကူ သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မကောင်းသော ချိန်ညှိခြင်းသည် ဆက်တင်များသာမကဘဲ၊ XYZ axes ပြဿနာများ သို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်ခြင်းကြောင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိမှုကို စစ်ဆေးရန်၊ သင်လုပ်နိုင်သည် စံကိုက်ညှိကွက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန် ၎င်းကို print ထုတ်ပါ။
ကောင်းသော ကပ်ငြိမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
La ပထမအလွှာ ပုံနှိပ်သည့်အပိုင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကောင်းမွန်သော adhesion မရှိပါက၊ ၎င်းတို့ကို ပုံသဏ္ဍာန်များဖြစ်စေသည် (အထူးသဖြင့် ABS ကဲ့သို့သော အရာများတွင်) ပုံသဏ္ဍာန်များဖြစ်စေသည် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့ကို ခွာနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရွှေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်ကို တတ်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်းနေရပါမည်။
ပပျောက်ရေးနေ့ အိပ်ရာကိုထိတဲ့အခါ အရေပြားက ဖုန်မှုန့်တွေ၊ အော်ဂဲနစ်အဆီတွေ၊ အညစ်အကြေးတွေ စုပုံလာပါတယ်။ မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် ချည်ထည်ဖြင့် ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အိပ်ရာများအတွက် IPA ကဲ့သို့ သန့်စင်သော အရက်ကို သင်သုံးနိုင်သည်။
သင်သုံးလျှင် စတစ်ကာများ သို့မဟုတ် တိပ်ခွေများ အိပ်ရာ၏ ကပ်ငြိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆပ်ပြာနှင့် ရေဖြင့် ဆေးကြောရန် (ခုတင်ကို 3D ပရင်တာမှ ဖယ်ရှားပါ) ခြစ်ထုတ်ပြီး ဆပ်ပြာနှင့် ရေဖြင့် ဆေးကြောရန် ကော်ကျန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပထမအလွှာကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက ကော်ကို အစားထိုးသင့်သည်။
Timing Belt Tension ချိန်ညှိမှု
အိမ်သုံး 3D ပရင်တာအများအပြားသည် အနည်းဆုံး axes2ခုပေါ်တွင် အချိန်ချိန်ကိုက်ခါးပတ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤကြိုးများသည် ပေါ့ပါးပြီး ထိရောက်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် အခါအားလျော်စွာ တင်းကျပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်:
ချောင်: အလွန်လျော့သွားသောအခါ သွားများသည် ယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်ပြီး သွားများကို ဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အပြင် အစိတ်အပိုင်း၏ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသည့် အရှိန်နှင့် ဦးတည်ရာပြောင်းလဲမှုများကို လျင်မြန်စွာ မတုံ့ပြန်နိုင်ပါ။
မြင့်မားသောဗို့အား: ၎င်းသည် (များစွာသောရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဖိုက်ဘာမှန် သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း) သို့မဟုတ် မော်တာများကို ပိုမိုအားတင်းခိုင်းခြင်းအပြင် ဝက်ဝံ သို့မဟုတ် ပူလီများကဲ့သို့သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို တွန်းအားဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် အလွှာချို့ယွင်းချက်များ၊ မတိကျသောအတိုင်းအတာများ စသည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၎င်းတို့အား မှန်ကန်စွာ တင်းကျပ်ရန်၊ သင့်အထူးမော်ဒယ်အတွက် လက်စွဲစာအုပ်ကို လိုက်နာပါ။ ၎င်းတို့တွင် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော Built in Belt tensioner ပါရှိတတ်သည်။ သင်ရုံရှိသည်။ ဝက်အူတင်းကျပ် ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ မင်းမှာရှိတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းစီမှာ တစ်ခုစီပါရှိတယ်။
အဲဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ်3in 1၊ အမျိုးအစား WD-40 နှင့် အလားတူပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် သင့်ပရင်တာကို ကောင်းစွာ ချောဆီမပေးရုံသာမက ကျန်ရှိသော ချောဆီများကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အဲဒီမှာ အဆီနှင့် ချောဆီအမျိုးအစားများစွာအခြားအရာများထက် ပိုကောင်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် သင့် 3D ပရင်တာထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသည့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ လူကြိုက်အများဆုံးအချို့သည် အဖြူရောင် လီသီယမ်အဆီများ၊ အချို့သော ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် Teflon ကိုအခြေခံ၍ ခြောက်သွေ့သောချောဆီများကဲ့သို့သော ချောဆီများကို အသုံးပြုကြသည်။
ချောဆီ သို့မဟုတ် အဆီချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သင့်သည်။ လိုအပ်သော ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးချပါ။ထို့ကြောင့် ပွတ်တိုက်မှု၊ ပုံနှိပ်မှုတွင် မျက်နှာပြင် မစုံလင်မှု၊ သို့မဟုတ် ဆူညံမှုများကြောင့် မော်တာများ၏ အပူလွန်ကဲခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ-
bearings သို့မဟုတ် linear bearings ပါသောချောင်းများ
သံလမ်းများ သို့မဟုတ် သံလမ်းများ
၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ချောဆီမလိမ်းဘဲ အချိန်အတော်ကြာ သုံးစွဲပါက၊ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေမဟုတ်သောကြောင့် အစားထိုးရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိတ်ဆို့သွားသည်အထိ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားသည်။ extruder nozzle လည်းဖြစ်ရမည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းမစတင်မီ သန့်ရှင်းပါ။. ၎င်းသည် တွယ်ကပ်နေသော ချည်မျှင်အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အနာဂတ်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွက် သင်သည် nozzle cleaning kit သို့မဟုတ် သုံးနိုင်သည်။ အမျှင်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။.
3D ပရင်တာ၏ ပါဝါအစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ထိမိခြင်းကြောင့် သတ္တုစုတ်တံများနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားပါ။
အချို့သော အကြံပြုချက်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
အဲဒါကို သင်လည်း သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ချည်မျှင် 3D ပရင်တာအချို့ "drool" သင်ပုံနှိပ်ခြင်းမစတင်မီအနည်းငယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် မကပ်မီ ပလပ်ဖောင်းမှ ဖယ်ရှားသင့်သော သွန်းသော ချည်မျှင်ချည်မျှင်ကို လွှတ်ချပြီး ပုံနှိပ်ရမည့် အပိုင်း၏ ပထမအလွှာကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
အ ပြင်ပ grout အစွန်းအထင်း တွေလည်း အရေးကြီးတယ်။ ဗေဒင်ဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် နော်ဇယ်ယိုယွင်းမှု သို့မဟုတ် အခန်းတွင်း မီးလောင်နေသော ပလတ်စတစ်၏အနံ့မရအောင် တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော သန့်ရှင်းရေးအတွက်၊ extruder ကို အပူပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးကိရိယာမှ အမွေးအမှင်ဖြီးဖြင့် ပွတ်တိုက်ရပါမည်။ သင့်ကိုယ်သင် မလောင်ကျွမ်းမိစေရန် ဂရုပြုခြင်းဖြင့် ခြစ်တံ သို့မဟုတ် ထူထဲသောအဝတ်စကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
သံသယရှိရင် ရှိတယ်။ အတားအဆီးတစ်ခုတတ်နိုင်ရင် အအေးထုတ်ယူရမယ်။ မဟုတ်ပါက၊ ABS သို့မဟုတ် PETG ကဲ့သို့ မြင့်မားသော အပူချိန်ချည်မျှင်များကို အသုံးပြု၍ သို့မဟုတ် စျေးကွက်တွင်ရှိသော သီးခြားသန့်ရှင်းရေးကြိုးများကို ဖြုတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဤယိုပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်၊ အသုံးပြုနေသောပစ္စည်းအတွက်သင့်လျော်သောပေါင်းစပ်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်အမြဲတမ်းသတိရပါ။
ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် သင်သည် ချည်မျှင်များယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများရှိ မျက်နှာပြင်အစေ့အဆန်များ၊ အဟန့်အတားများ၊ အစွန်းအထင်းများနှင့် စသည်တို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြဿနာများ လွန်ကဲစွာ ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူခြင်း ကဲ့သို့သော။
ချည်မျှင်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်. စိုထိုင်းဆနှင့် ဖုန်မှုန့်များသည် ချည်မျှင်ကို ထိခိုက်စေဆုံးအချက် နှစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျှင်လွှာ၏ သိုလှောင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းသည် နော်ဇယ်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အဆီဖုများထွက်ခြင်း၊ အမျှင်များ ဖြတ်သန်းသွားသော ပြွန်အတွင်း ပွတ်တိုက်မှု တိုးလာခြင်းနှင့် စိုထိုင်းဆကြောင့် ကွဲအက်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ အခြောက်ခံသေတ္တာများနှင့် လေဟာနယ်အိတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အိုးအိမ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေစစ် သင်၏ 3D ပရင်တာအတွက်။
ရံဖန်ရံခါ လိုအပ်သည်။ nozzle အစားထိုးပါ။ သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ ထုတ်ယူမှု။ အစေးများမရှိသောပြဿနာတစ်ခု၊ ဤအခြားအရာများတွင်အလင်းရင်းမြစ်များပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအားနည်းချက်များရှိသည်။ တခါတရံတွင် ဆပ်ပြာကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းသည် ၎င်း၏ မူလအရောင် ပျောက်ဆုံးသွားကာ အစွန်းအထင်းများ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင် ယိုယွင်းမှုတို့ကို ပြသနိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏ အသွင်အပြင်ကို ကြည့်သကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။
အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏအသုံးပြုပါက ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုထားသည်။3သို့မဟုတ်6လတိုင်း. PLA ကိုသာ အသုံးပြုသောအခါ၊ ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏ တာရှည်ခံမှုသည် များသောအားဖြင့် ပိုရှည်သည်။
သင်ရှာနိုင်သည်ကိုသတိရပါ အမျိုးအစားနှစ်မျိုး နော်ဇယ်များ
ကြေးဝါ: ၎င်းတို့သည် အလွန်စျေးသက်သာပြီး PLA နှင့် ABS ကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးမရှိသော အမျှင်များအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
မာကျောသောသံမဏိ: ၎င်းသည် နော်ဇယ်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်မှုကို နှောင့်နှေးစေသော အခြားသော အညစ်အကြေးများသော ဒြပ်ပေါင်းများအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒီ Nozzle နဲ့ အစားထိုးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လွယ်ကူသော ရှိပြီးသားတစ်ခုကို ဝက်အူဖြုတ်ပြီး အသစ်ကို ထုထည်ခေါင်းပေါ် ဝက်အူစွပ်တာမျိုး။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကသဟဇာတဖြစ်ရပါမည်။
အမြဲတမ်း စိတ်ကူးကောင်းတယ်။ ပုံနှိပ်အိပ်ရာကို သန့်ရှင်းပါ။ ပုံနှိပ်ပြီးတိုင်း ချည်ထည်တစ်ထည်နှင့်။ အစွန်းအထင်း သို့မဟုတ် အမှတ်အသားများ ကျန်ရှိနေနိုင်သော်လည်း အထည်ကို ဖြတ်သွားခြင်းသည် လုံလောက်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ သင်သည် 3D ပရင်တာ၏ စိုစွတ်မှုမဖြစ်စေရန် ဆပ်ပြာနှင့်ရေအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုကာ XNUMXD ပရင်တာ၏ စိုစွတ်မှုမဖြစ်စေရန် အိပ်ရာကိုဖယ်ရှားပါ။ အိပ်ယာပြန်မချခင် ခြောက်သွေ့နေအောင် သေချာထားပါ။
ပရင်တာ၏ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်ဆိုပါကaကိုအသုံးပြုပါ။ မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် ချည်ထည် ပျဉ်းမကပ်။ ၎င်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကို သင်သုံးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် SLA၊ LCD နှင့် DLP အမျိုးအစား ပရင်တာများ၏ အကာများကဲ့သို့ polycarbonate သို့မဟုတ် acrylic မျက်နှာပြင်များဖြစ်ပါက အရက် သို့မဟုတ် အမိုးနီးယားပါသည့် ထုတ်ကုန်များကို မသုံးမိစေရန် သေချာစေပါ။ မျက်နှာပြင်များ။
ဤအမျိုးအစားကို သန့်ရှင်းရေး ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် သံလမ်းများ သို့မဟုတ် အခြားအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် အညစ်အကြေးများ စုပုံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မမှန်ကန်သော လှုပ်ရှားမှုများ၊ အစိတ်အပိုင်းပုံမမှန်ခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် ထူးဆန်းသော ဆူညံသံများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
မမြင်သောအရာကို သန့်ရှင်းစေပါ။ ကောင်းမွန်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ်များ၊ ပန်ကာများနှင့် အပူပေးစက်များ၊ အပေါက်များကဲ့သို့သော အချို့သောလျှို့ဝှက်အစိတ်အပိုင်းများသည် ဖုန်မှုန့်များနှင့် အညစ်အကြေးများကို အများအပြားစုပုံစေပြီး ကဲ့သို့သော အဖြစ်များသောပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်-
ပန်ကာ သို့မဟုတ် ဝက်ဝံပေါ်ရှိ ဖုန်များကြောင့် ပန်ကာများ ကောင်းစွာမလှည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် အအေးခံမှု ညံ့ဖျင်းပါသည်။ ပြီးတော့ ရေနစ်တာတောင် ပိတ်ဆို့နေတယ်။
အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်များတွင် ဝါယာရှော့ပြဿနာများ ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် အစုအဝေးများ။ ၎င်းသည် ဖုန်များတွင် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများမှ အစိုဓာတ်ကို စုပုံစေပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ်ပြားကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှုကို ဟန့်တားပေးသည့် ဂီယာများနှင့် မော်တာများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
မသန်စွမ်း အဲဒါကိုရှောင်ကြဉ်ပါသေးငယ်သော စုတ်တံ၊ စုတ်တံ သို့မဟုတ် ဘရပ်ရှ်ကို အသုံးပြု၍ ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်သကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။ သွားလာ၍မရသော နေရာများကို သန့်ရှင်းရန် သေးငယ်သော ဖုန်စုပ်စက်နှင့် CO2 မှုန်ရေမွှားများကိုပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစေးအစွန်းအထင်း သို့မဟုတ် အစေးအစက်အပြောက်များရှိလျှင် ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန် ရေ သို့မဟုတ် အိမ်သုံးသန့်စင်ဆေးကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် A ကိုသုံးနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် ချည်ထည် ပန်းကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့။ ဆက်လက်၍ စွန်းထင်းနေပါက အဝတ်စိမ်ရန် isopropyl alcohol အချို့ကို အသုံးပြုပါ။
3D ပရင်တာ ဖာမ်းဝဲလ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံး ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ မင်းလည်း လုပ်သင့်တယ်။ သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ ဖာမ်းဝဲလ်သည် ခေတ်မမီကြောင်း စစ်ဆေးပါ။. သင့်တွင် နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမရှိပါက၊ သင်သည် ဤအရာကို အပ်ဒိတ်လုပ်သင့်သည်။ လူကြိုက်များသော ပရင်တာထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ပုံမှန်အားဖြင့်6လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေမှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ဤအပ်ဒိတ်များကို ယူဆောင်လာနိုင်သည်။ တိုးတက်မှုအချို့ အဖြစ်:
သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ firmware ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်အတွက်၊ သင်လိုအပ်လိမ့်မယ်:
Firmware အပ်ဒိတ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းရမည့် PC တစ်ခု။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ Arduino IDE ကိုအကယ်၍ သင်၏ 3D ပရင်တာသည် Arduino ဘုတ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားလျှင်၊
ပရင်တာနှင့် PC ကိုချိတ်ဆက်ရန် USB ကြိုး။
သင်၏ 3D ပရင်တာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လက်ထဲတွင် (XYZ အဆင့်မြှင့်စက်များနှင့် ဖောက်လုပ်စက်များ၊ အများဆုံး ဝင်ရိုး ခရီးအကွာအဝေး၊ ဖိဒ်နှုန်း၊ အမြင့်ဆုံး အရှိန်နှုန်း၊ စသည်) တို့ကို လက်တွင် ထားရှိပါ။
Firmware ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်။ ၎င်းသည် သင်၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပရင်တာ၏ မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောတစ်ခုကို ရှာဖွေသင့်သော်လည်း တရားဝင်ဆိုက်များမှမဟုတ်ဘဲ ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များမဟုတ်ဘဲ အမြဲတမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဤတွင်အချို့ စိတ်ဝင်စားမှု link များ ကွဲပြားခြားနားသောဆော့ဖ်ဝဲကို update နှင့် firmware အတွက်:
အဖြစ်များသော 3D ပရင်တာ ပြဿနာများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလမ်းညွှန်
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြီးသွားပေမယ့် များမကြာမီ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း စနစ်များ ပျက်ကွက် သို့မဟုတ် ပျက်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပြဿနာများကို အဖြေရှာနည်းနှင့် သင်၏ 3D ပရင်တာအား ပြုပြင်နည်းကို သိသင့်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အလားတူ၊ SLA သည် DLP သို့မဟုတ် အခြားနည်းပညာအမျိုးအစားများနှင့်မတူကြောင်း သတိပြုရပါမည်။ လူတိုင်းမှာ သူ့ပြဿနာကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဤနေရာတွင် အဖြစ်များဆုံးပြဿနာများကို အများစုမှာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းသုံးအတွက် အမျှင်ဓာတ် သို့မဟုတ် အစေးပရင်တာများဖြစ်သည်။
*မှတ်ချက်: သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ တကယ်သိရင် ပြုပြင်မှုတစ်ခုဆက်လုပ်သင့်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်းကို ချိုးဖောက်ပါက သင်သည် အဆိုပါအာမခံကို ဆုံးရှုံးနိုင်သောကြောင့် သင့်စက်ပစ္စည်း၏ အာမခံစည်းကမ်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မဖြစ်စေရန် သင့်ပရင်တာအား အမြဲတမ်းပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ အပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းသည် အေးနေကြောင်း သေချာပါစေ။ သေချာပါတယ်၊ သင်သည် resins ကိုကိုင်တွယ်တော့မည်ဆိုပါက၊ အကာအကွယ်မျက်မှန်၊ ဖြစ်နိုင်သောအငွေ့များအတွက်မျက်နှာဖုံးနှင့်အစေးလက်အိတ်များဝတ်ဆင်ရန်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်၏ 3D ပရင်တာသည် အဘယ်ကြောင့် ပရင့်ထုတ်ခြင်း မပြုသနည်း။
ဒီပြဿနာက အများဆုံးထဲက တစ်ခုပါ။ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းတရားများ ရှိတယ်၊ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ-
ပရင်တာအား ထည့်သွင်းပြီး မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ပရင်တာသို့ ပါဝါ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပြီး ၎င်းကို ဖွင့်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ချည်မျှင်ရှိပါသလား။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော အကြောင်းအရင်းများအနက်မှတစ်ခုမှာ များသောအားဖြင့် အမျှင်များမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုးအသစ်တစ်ခုကို ပြန်ဖွင့်ပြီး ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။
အမျှင်များပါရှိလျှင် အမျှင်ကို ကိုယ်တိုင်တွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ တခါတရံတွင် ကောင်းစွာမဖြတ်သန်းနိုင်သော ပြွန်ဧရိယာ ပြဿနာရှိနိုင်ပြီး ထိုဧရိယာကို ဖြတ်သန်းရန် လုံလောက်သော စွမ်းအားလည်း ရှိနိုင်သည်။
Filament feed motor လှည့်နေပြီး တွန်းဂီယာ လှည့်ခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကြည့်ရှုပါ။
အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကုဒ်ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရန် ပရင်တာမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ပါ။
နော်ဇယ်သည် အိပ်ရာနှင့် မသင့်လျော်သောအကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည်။
ဟုတ်မဟုတ်၊ နော်ဇယ်သည် အလွန်ဝေးကွာပြီး လေထဲတွင် စာသားအတိုင်း ရိုက်နှိပ်ထားသကဲ့သို့ extruded ပလပ်စတစ်ကို မထွက်စေရန် နော်ဇယ်သည် အိပ်ရာနှင့် နီးကပ်လွန်းပါသည်။အိပ်ရာဝင်ချိန်ညှိခြင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Filament ကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပိုင်းများပျောက်ဆုံးခြင်း။
စျေးသက်သာတဲ့ ပရင်တာတစ်လုံးကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ toothed ဂီယာ ချည်မျှင်များကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွန်းထုတ်ရန်၊ သို့သော် အဆိုပါ ဂီယာများသည် အမျှင်များကို ပျက်စီးစေပြီး ၎င်းကိုပင် ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ထို့နောက်-
ဂီယာအကိုက်ခံရခြင်းအတွက် သေချာစစ်ဆေးပါ သို့မဟုတ် ဂီယာကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြတ်သွားခြင်း မရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
Filament လမ်းညွှန်စနစ် ပြဿနာများ။ စစ်ဆေးရန်-
Direct Extruder - မော်တာပူလီသည် ချွတ်ယွင်းသွားကာ အစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဂီယာသွားများ စုတ်ပြဲသွားကာ အစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ကင်မရာသည် လုံလောက်သော ဖိအားကို မထုတ်ပေးခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Bowden- ချည်မျှင်ကိုတင်းကျပ်သောဝက်အူများသည် အလွန်လျော့ရဲသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အမျှင်ကိုတွန်းသော bearing သည် ချောမွေ့စွာမလှည့်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မူလီများကို တင်းကျပ်ပါ သို့မဟုတ် ဝက်ဝံကို အစားထိုးပါ။
အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းအတွက် မသင့်လျော်သော extrusion အပူချိန်။
Extrusion Speed ​​အရမ်းမြင့်တယ်၊ အဲဒါကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားပါ။
ပရင့်ဆက်တင်များတွင် ပြင်ဆင်ထားသော အချင်းထက်သေးငယ်သော နော်ဇယ်ကို အသုံးပြုပါ။
ပရင်တာသည် ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းကို အလယ်တွင်ထားခဲ့သည်။
ပရင့်ထုတ်တဲ့အခါ အပိုင်းနဲ့ 3D ပရင်တာ အလယ်အလတ်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ရပ်သည်။အပိုင်းအစကို မပြီးဆုံးဘဲ၊ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်-
ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ပျက်စီးနေသော PTFE ပြွန်ကို အစားထိုးရမည်။
ချည်မျှင်ကိုက်ခြင်း (ဤပြဿနာအတွက် သီးသန့်ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ)။
အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲခြင်း။ အချို့သော ပရင်တာများတွင် နောက်ထပ်ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်စေသော စနစ်များရှိသည်။
extruder တွင်ဖိအားနိမ့်။ မော်တာတဘက်တွင် ချည်မျှင်ကို ညှစ်ရန် ကြိုးစားပါ သို့မဟုတ် ကင်မရာသည် မှန်ကန်သောဖိအားကို ထုတ်ပေးနေပါသည်။
အပိုင်းကတော့ ကောင်းကောင်းရိုက်ထားပေမယ့် အသေးစားအသေးစိတ်အချက်များ ပျောက်ဆုံးနေ၍ ၎င်းတို့ကို ပုံနှိပ်မထားပါ။. ဤပြဿနာသည် အောက်ပါတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
Nozzle အချင်း ကြီးလွန်းသည်။ သေးငယ်သော အချင်းရှိသော တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။ Resolution သည် အများအားဖြင့် nozzle ၏ အချင်း၏ 80% ဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။
သင်အသုံးပြုနေသော နော်ဇယ်၏အချင်းအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲကို မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိနိုင်သည်။ သင်တပ်ဆင်ထားသည့် ပရင်တာထက် အနည်းငယ်နိမ့်သော နော်ဇယ်ကိုပင် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အစိတ်အပိုင်း၏ တွယ်တာမှု အားနည်းခြင်း။
အခါ အပိုင်းအစက အိပ်ရာပေါ်မှာ မကပ်ဘူး။၊ အိပ်ရာ၏ အပူချိန် မမှန်နိုင်ပါ သို့မဟုတ် ကုတင်မျက်နှာပြင်၏ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းသည် မမှန်နိုင်ပါ။ အခြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများမှာ-
Nozzle က အိပ်ရာနဲ့ အရမ်းဝေးတယ်။ အမြင့်ကို ချိန်ညှိပါ။
ပထမအလွှာ ပုံနှိပ်ခြင်း အလွန်မြန်သည်။ အရှိန်လျော့သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် အလွှာလေဝင်လေထွက်ရှိလျှင် ပထမအလွှာကို မြန်မြန်အေးစေပြီး ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
အိပ်ရာ၏ အပူချိန်သည် လုံလောက်မှုမရှိပါ၊ သင်အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်သောအပူချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
သင့်တွင် အပူပေးထားသော အိပ်ရာ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် ပုံနှိပ်နေပြီး သင့်တွင် အပူခံအခြေ မရှိပါ။ (ပြင်ပတစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်သည်။)
ဘောင်မရှိခြင်း၊ ပုံနှိပ်ပုံ၏ မျက်နှာပြင်သည် အလွန်သေးငယ်သောအခါ ဖန်တီးထားသော ဆူးတောင်များ။ ဤ fins များသည် ချုပ်ကိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဖေါင်တစ်ဖောင် သို့မဟုတ် အပိုင်းအစအောက်တွင် ပုံနှိပ်စက်ကို ထုလုပ်နိုင်သည်။
မြင်လိုက်တာနဲ့ လုံး၀မပြည့်မီသော အလွှာများကဲ့သို့ အလွတ်ကွက်လပ်များသို့သော် ၎င်းသည် နောက်ဆုံးအလွှာကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်၊
ထုတ်ယူမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည် (အောက်တွင် ကြည့်ပါ)။
အလွှာများတွင် အလွှာများ ပြတ်လပ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင့်ဒီဇိုင်းတွင် အလွှာများကို ပိုမိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဖြည့်စွက်မှုနည်းသော ဆက်တင် (%)။ ကြိုးများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် နိမ့်သောဆက်တင်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းသည် ဤပြဿနာကို ဖြစ်စေသည်။
မော်ဒယ်အတွက် ပျားလပို့ပုံစံကို သင်အသုံးမပြုကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
အစိတ်အပိုင်း၏ အလွှာများ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် မဖြည့်ထားသော ပျက်ပြယ်မှုများ
ရသောအခါ နံရံများ သို့မဟုတ် သင့်အခန်း၏ ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ပလတ်စတစ်များ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ-
ညံ့ဖျင်းစွာ ချိန်ညှိထားသော ကွက်လပ်ဖြည့်ဆက်တင်များ။ ပြီးပြည့်စုံမှုကို တိုးတက်စေရန် ဖြည့်စွက်တန်ဖိုးကို တိုးမြှင့်ပါ။
ပတ်ပတ်လည် အကျယ်သည် အလွန်သေးငယ်သည်။ သင့်ပရင်တာဆက်တင်များတွင် ပတ်၀န်းကျင်များ၏ အမြင့်ကို တိုးမြှင့်ပါ။ Laminator အများစုအတွက် သင့်လျော်သောတန်ဖိုးသည် အများအားဖြင့် နော်ဇယ်၏ အချင်းနှင့် တူညီသော အတိုင်းအတာကို ထည့်ရန် ဥပမာ၊ သင့်တွင် 1.75 mm ရှိလျှင် 1.75 ထည့်ပါ။
Extruder မော်တာ အပူလွန်ကဲခြင်း။
ဤမော်တာသည် ပရင့်ထုတ်စဉ်အတွင်း အလွန်ခက်ခဲစွာ အလုပ်လုပ်ပြီး ချည်မျှင်ကို အဆက်မပြတ် တွန်းပို့သည်။ ဒါက ပူစေတယ်။အထူးသဖြင့် ဤပြဿနာမျိုးကို ကာကွယ်ရန် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် စနစ်များမရှိသောအခါတွင်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်ပူနိုင်သည်။
အချို့သော မော်တာယာဉ်မောင်းများ အပူချိန်မြင့်မားလွန်းပါက ဓာတ်အားပြတ်တောက်ရန် အပူဖြတ်စနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် X နှင့် Y ဝင်ရိုးမော်တာများကို လှည့်ပတ်ကာ နော်ဇယ် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ခေါင်းကို ရွှေ့ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း ပလပ်စတစ်မော်တာသည် လုံးဝရွေ့မည်မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ပရင့်ထုတ်မည်မဟုတ်ပါ။
စစ်ဆေးပါ အအေး နှင့် ဤအပိုင်းရှိ ပန်ကာ၊ မော်တာ အေးသွားစေရန် အချိန်အနည်းငယ် ထားပေးပါ။ အချို့သော ပရင်တာများတွင် ပရင်တာအား အေးသွားစေရန်နှင့် နောက်ထပ်ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန် အလိုအလျောက်ပိတ်သည့် စနစ်များရှိသည်။
ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်း- အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတတ်သောကြောင့် ဤပြဿနာကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်သည်။ ကွေးသော သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍန်လွဲသောထောင့်များရှိသည်။ ပုံနှိပ်ပြီးနောက်။ ဤပြဿနာသည် အများအားဖြင့် အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူပေးစနစ်မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အပူချိန်ကွာခြားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်နိုင်သော်လည်း ABS တွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ABS+ ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။. သမားရိုးကျ ABS ကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် 3DLac လိုမျိုး fixative ကိုသုံးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖယ်ရှားမယ့် ထောက်ပံအတောင်ပံတွေကို အပိုင်းတစ်ဝိုက်မှာလည်း Brim ဖန်တီးပါ။
မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။ အအေးကြမ်းများ အခန်းထဲတွင် အမျှင်များ ပိုမိုခိုင်မာလာပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ပစ္စည်းများ ပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်သောကြောင့် အခန်းတွင်းရှိ အမျှင်များ ပိုမိုခိုင်မာလာစေသည်။
ကြိုးတပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျော့တော့သော 3D ပရင်တာပြုပြင်ခြင်း။
El ဖျော့တော့ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ကြိုးများ ပုံတစ်ခုတွင် ကပ်နေသော ချည်မျှင်ကြိုးများသည် နောက်ထပ်အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိချိန်ညှိမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ အပူချိန်၊ မလုံလောက်သော ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အမျှင်အမျိုးအစားကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပူသောကော်သေနတ်ကို အသုံးပြုဖူးပါက၊ ဤချည်မျှင်များသည် မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီး 3D ပရင်တာများတွင် အလားတူဖြစ်တတ်သည်ကို သင်သေချာပေါက် သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
မသန်စွမ်း ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအကွာအဝေးသည် မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်းအမြန်နှုန်းလည်း မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ ABS နှင့် PLA ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၊ ဆုတ်ခွာမှုအမြန်နှုန်း 40-60mm/s နှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်ယူရန်အတွက် 0.5-1mm အကွာအဝေးသည် များသောအားဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ Bowden အမျိုးအစား extruder များတွင်၊ ၎င်းကို အမြန်နှုန်း 30-50 mm/s နှင့်2mm အကွာအဝေးအထိ လျှော့ချသင့်သည်။ အတိအကျ စည်းကမ်းမရှိသောကြောင့် မှန်ကန်သည့်တိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒါစစ်ဆေးပါ မြန်နှုန်းနှင့်အပူချိန် fusion တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသော ချည်မျှင်များ မစိုစွတ်စေရန်။ အထူးသဖြင့် အပူချိန် အရမ်းမြင့်နေတဲ့အခါ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများ အရမ်းကြီးတယ်။ အချို့သော ပရင်တာများတွင် ကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဖြတ်ကျော်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖွင့်ထားသည့် နေရာများကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဤစာကြောင်းများ ချန်ထားခဲ့ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊ ၎င်းသည် ဖွင့်ထားလျှင် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
အ nozzles များပိတ်ဆို့နေတတ်သည်။၎င်းသည် FDM အမျိုးအစား 3D ပရင်တာများတွင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးနှင့် မကြာခဏ ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို extrusion head တွင် ထူးဆန်းသော အသံတစ်ခုဖြင့် တွေ့ရှိပြီး အမျှင်များသည် နော်ဇယ်မှ ရုတ်တရက် ထွက်လာခြင်း ရပ်သွားပါသည်။
အ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတရားများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ချည်မျှင်အရည်အသွေးညံ့သောကြောင့် သင်သည် အခြားအရည်အသွေးပိုကောင်းသော ချည်မျှင်ကြိုးကို စမ်းကြည့်သင့်သည်။
ထုတ်ယူမှု အပူချိန် မမှန်ကန်ပါ။ hotend အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် နေရာရှိကြောင်းနှင့် ဆက်တင်အပူချိန် မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ချွတ်ယွင်းနေသော ချည်မျှင်အပိုင်း။ ချည်မျှင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီး ပြဿနာအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားရန် 20-30 စင်တီမီတာခန့်ဖြတ်ကာ ပြန်လည်စတင်ပါ။ နော်ဇယ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ပင်အပ် သို့မဟုတ် ဖောက်ထားသော ထိပ်ဖျားကို ဖြတ်ပြေးခြင်းသည်လည်း အကြံကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် စက်မှုကုန်လှောင်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ စသည်ဖြင့် ဖုန်မှုန့်များသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်ပါက၊ အမျှင်ဓာတ်သို့ မရောက်ရှိမီ ဆီအနည်းငယ်ပါသော ဆပ်ပြာရည်ကို Oiler ကို အသုံးပြုသင့်သည်။
အလွှာပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အလွှာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
များသော အားဖြင့် ၊ အလွှာများထဲမှ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ X သို့မဟုတ် Y ဝင်ရိုးပေါ်တွင်။ ဤပြဿနာအတွက် ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များမှာ-
ပူတင်းသည် မြန်လွန်းသဖြင့် မော်တာသည် ခြေလှမ်းများ ပျောက်နေသည်။ အရှိန်လျှော့။
အရှိန်အဟုန် ကန့်သတ်ချက်များ မမှန်ကန်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် firmware အရှိန်မြှင့်ခြင်းတန်ဖိုးများကို ဖြတ်တောက်ခဲ့လျှင်၊ သင်သည် မှားယွင်းသော အရာများကို ထည့်သွင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ဒါကိုပြင်ရတာ နည်းနည်းတော့ ခက်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ စက်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူနဲ့ စစ်ဆေးသင့်တယ်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ပြဿနာ၊ သွားပတ်ကြိုးများ၏ တင်းမာမှုပြဿနာများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကဲ့သို့သော ပြဿနာများ၊ stepper မော်တာ. အကယ်၍ သင်သည် မကြာသေးမီက ဒရိုက်ဗာများကို အစားထိုးခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ လှိမ့်ခြင်းစတင်ခဲ့ပါက၊ သင်သည် မှန်ကန်သော mA ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
မင်းမြင်တဲ့အခါ ပလပ်စတစ်အစွန်းအထင်း သို့မဟုတ် လိမ်းကျံခြင်း။ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများ အပိုင်းအစတွင် ကပ်နေသကဲ့သို့ ၎င်းသည် အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်-
အစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင် ချွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွှဲနစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပြီး ယင်းပိုလျှံမှုများကို ချန်ထားပေးသည့် အပူချိန်လွန်ကဲစွာ ထုတ်ယူမှု။ အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သော အပူချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ချည်မျှင်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏ မှားယွင်းသော ဆက်တင်။
ပိုလျှံနေတဲ့ ပလတ်စတစ်ကို တစ်စက်ပုံစံနဲ့
အပိုင်းအစတွေ တွေ့တဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပလပ်စတစ်များ အလွန်အကျွံ များနေပြီး ထိုပိုလျှံမှုများသည် အစက်အပြောက်များ အသွင်ဆောင်သည်။ (အညစ်အကြေးများသည် ပိုမိုဖရိုဖရဲပုံစံများရှိသည်)၊ ၎င်းတို့သည် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် extruder သို့မဟုတ် hotend ဒြပ်စင်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ချည်မျှင်မပါသော နော်ဇယ် (အချို့သော အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးဝါ နော်ဇယ်များသည် ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်းကြောင့် တင်းကျပ်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ယူခြင်းကို လက်မခံပါ)။
ကြိုးကို ကောင်းစွာ မတင်းကျပ်ပါ။
ကဲ့သို့သော အမှတ်အသားအချို့ကို သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် grooves များ အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်။ ဤကိစ္စတွင်၊ နော်ဇယ် သို့မဟုတ် နော်ဇယ် ပွတ်တိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်မှာ-
Homming Z ကို ချိန်ညှိမှု ညံ့ဖျင်းပြီး နော်ဇယ်သည် အလွန်နီးကပ်ပါသည်။
extrusion သည် ပုံမှန်အောက်ရောက်သောအခါ၊ အလုံအလောက် extrude မလုပ်ပါ။ ချည်မျှင်၊ ပြဿနာတစ်ခုသည် ပတ်၀န်းကျင်များကို ကောင်းစွာမဖြည့်ဘဲ သို့မဟုတ် အလွှာများနှင့် မစုံလင်မှုများကြားတွင် နေရာလွတ်များ ထွက်လာသည်။ ဤပြဿနာအတွက် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများမှာ-
ချည်မျှင်လုံးပတ်မှားခြင်း။ သင့်ပရင်တာအတွက် မှန်ကန်သော အမျှင်ဓာတ် (1.75mm၊ 2.85mm၊ 3mm၊…) ကို အသုံးပြုထားကြောင်း သေချာပါစေ။
extruder multiplier ကန့်သတ်ဘောင် (extrusion multiplier) ကို တိုးစေသည်။ ၎င်းသည် extruded ပစ္စည်း ပမာဏကို ကွဲပြားစေရန် စီမံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် တန်ဖိုး 1 မှ 1.05 သို့သွားပါက၊ သင်သည် 5% ပိုထုတ်လိမ့်မည်။ ABSa0.9 အတွက် PLAa1.0 ကို အကြံပြုထားသည်။
una အလွန်အကျွံ extrusion အမျှင်ဓာတ်များလွန်းသဖြင့် အလွှာကို ပြဿနာဖြစ်စေပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် ရလဒ်မကောင်းပါ။ အပိုင်း၏ထိပ်တွင် ပလပ်စတစ်အပိုပါရှိကြောင်း သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းများသည် underextrusion နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက်လွန်ကဲသော ကန့်သတ်ဘောင်တန်ဖိုးများ (ယခင်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ၊ ကန့်သတ်ဘောင်များကို ပြောင်းပြန်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းကိုမြှင့်တင်မည့်အစား တန်ဖိုးကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်)။
အချို့သော extruder များနှင့်ပြဿနာများရှိသည်။ ပလပ်စတစ်ယိုစိမ့်မှု ပြွန်များနှင့် နော်ဇယ်အတွင်း ကျန်ရှိနေသော သွန်းသော ပလပ်စတစ်များသည် မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသောအခါတွင်၊ ၎င်းသည် ပိုလျှံနေသော ပုံနှိပ်ခြင်းကို မပျက်စီးစေရန် ကာကွယ်ရန် နော်ဇယ်၏ derating သို့မဟုတ် priming လိုအပ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ အတွင်းတွင်ကျန်ခဲ့သော အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် မပုံနှိပ်မီ နော်ဇယ်ကို ကောင်းစွာ သန့်စင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပရင်တာတချို့ရှိတယ်။ ပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များ အဲဒါအတွက် သီးခြား အခြားသူများက ထိုပလတ်စတစ်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံရိုက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
အပိုင်းအစတွေ ရှိတယ်လို့ မြင်ရင်၊ ဟိုဘက်ဒီဘက် လှိုင်းတွေအရာဝတ္တုတစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးတွင် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင် Z ဝင်ရိုးပေါ်တွင် ဖြောင့်မနေသော လျော့ရဲခြင်း သို့မဟုတ် မျဉ်းဖြောင့်ရွေ့လျားမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းဝင်ရိုး သို့မဟုတ် ချောင်းများ၏ အခြေအနေကို သင်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဖြောင့်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အခွံမာသီးများနှင့် bolts များကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်နိုင်စေရန် မော်တာများနှင့် အာရုံစိုက်ထားသည်။
ပုံနှိပ်တဲ့အပိုင်းမှာ ပါသွားတဲ့အသေးစိတ်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်အမင်း အပူလွန်ကာ ပလပ်စတစ်များ အရည်ပျော်ပြီး ပုံပျက်သွားစေသည်။ထို့ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်မှာ-
အလွှာအအေးမလုံလောက်ပါ။ အအေးခံခြင်းကို အဆင့်မြှင့်ပါ သို့မဟုတ် သီးခြားအအေးပေးစနစ်ကို ထည့်ပါ။
အပူချိန် အရမ်းမြင့်တယ်။ သင်အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်သော ထုထည်အပူချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ပုံနှိပ်တာ အရမ်းမြန်တယ်။ ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းကို လျှော့ချပါ။
အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုမှ အလုပ်မလုပ်ပါက၊ အပိုင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရိုက်နှိပ်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် အလွှာများ အေးသွားစေရန် အချိန်ပိုပေးပါမည်။
resin curing တွင် delamination
La delamination ၎င်းသည် resin 3D ပရင်တာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ၎င်းသည် ဖလမ်ပရင်တာများတွင် delamination မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာအမျိုးအစားသည် ကုသထားသောအလွှာများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲသွားစေရန် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲဖြစ်သော အစေးများကို အစေးကန်ထဲတွင် မျောပါနေသေးသည်။ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍
မော်ဒယ်၏ ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြဿနာများ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှုများနှင့် ပြဿနာများ။
ပုံနှိပ်ခြင်းကို တစ်နာရီကျော်ကြာ ခေတ္တရပ်ထားသည်။
အစားထိုးရန် လိုအပ်သော အစေးကန်ဟောင်း။
ဆောက်ထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းက ချောင်နေတယ်။
optical curing မျက်နှာပြင်များသည် ညစ်ညမ်းလာပြီး သန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးရမည်။
မြင်လိုက်တာနဲ့ အပေါက်တွေချည်း အချို့သော ခုံးအောက်သို့ ပုံနှိပ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများတွင် စုပ်ခွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်း လေကို ပိတ်မိကာ ထိုအပေါက်ကို အစေးဖြင့် ပြည့်မသွားစေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် တိုင်ကီထဲတွင် ခိုင်မာသော အစေးခြေရာများကို ချန်ထားခဲ့နိုင်သောကြောင့် အစေးကို စစ်ထုတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အခေါင်းပေါက် သို့မဟုတ် ခုံးအစိတ်အပိုင်းများ၏ 3D မော်ဒယ်များတွင် ရေနုတ်မြောင်းများ မရှိခြင်း။ 3D ဒီဇိုင်းတွင် အပေါက်များကို ဖောက်ထားသောကြောင့် ပုံနှိပ်နေစဉ်တွင် ရေနုတ်မြောင်းရှိသည်။
Model orientation ပြဿနာများ။ လေဖြည့်သွင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် အပေါက်ကို ရေမြုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားပါ။
၎င်းသည် အခြားအတော်လေး ထူးဆန်းသည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အချို့သော resin 3D ပရင်တာများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ မြင်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အင်္ဂါရပ်အချို့တွင် ပျက်ပြယ်သွားသည်။.၊ များသောအားဖြင့် မီးတောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်များ၊ ချွန်ထက်သောအစွန်းများ သို့မဟုတ် အစေးကန်၏အောက်ခြေရှိ ကုစားထားသော အစေးအလွှာများရှိသည်။
ဖြစ်ပေါ်သည်သာ SLA ပရင်တာများပေါ်တွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အစေးကန်၏အောက်ခြေတွင် ကပ်လျက် ကုသနေသော လေဆာ သို့မဟုတ် အလင်းရင်းမြစ်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပိတ်ဆို့လိုက်သည့်အခါ ၎င်းကို နောက်အလွှာသို့ မရောက်ရှိအောင် တားဆီးပေးသည်။ ဖြေရှင်းချက်သည်-
အစေးကန်ကို အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း။ ၎င်းတို့သည် အစေးများကို စစ်ထုတ်ပြီး တိုင်ကီကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်သည့် အကြွင်းအကျန်များ ရှိ၊မရှိ သို့မဟုတ် တိုင်ကီကို အစားထိုးရန် သင့်အား တွန်းအားပေးမည့် ပျက်စီးမှုများ ရှိ၊မရှိ ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
Cloud Standard resins အသုံးပြုခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် အခြား resin အမျိုးအစားကို စမ်းကြည့်ပါ။
အလင်းမျက်နှာပြင်များကို ညစ်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ ဒါကလည်း ဒီပြဿနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
3D မော်ဒယ်၏ ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှု ပြဿနာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို CAD ဒီဇိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမည်။
အပေါက်များ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်မှုများ
ချီးမွမ်းခံရသောအခါ၊ orifices (ဥပမာအားဖြင့် သေးငယ်သော ဥမင်အစိတ်အပိုင်းများ) သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက် အချို့သော ဒေသများတွင် အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
အစေးကန်မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အလင်းပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ် အခြားအလင်းပြန်မျက်နှာပြင်များရှိ အပျက်အစီးများ။ ၎င်းသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် သင့်အား ထိခိုက်နေသော အစိတ်အပိုင်းကို သန့်ရှင်းစေမည်ဖြစ်သည်။
အစေးတိုင်ကီ၏ မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အလင်းပြန်ဒြပ်စင်တစ်ခုခုတွင် ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် မစုံလင်မှုများ။ ၎င်းသည် ခြစ်ထားသောဒြပ်စင်ကို အစားထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်မျိုးလေး တန်ဖိုးထားရင် ဒါကိုတော့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပုံနှိပ်စာကြောင်းတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကပ်လျက်မျဉ်းမှ ခွာသွားသကဲ့သို့ ပထမအလွှာရှိ ပါးဟက်များ သို့မဟုတ် ပါးဟက်များ၊
ပထမအလွှာရဲ့ အမြင့်က အရမ်းမြင့်တယ်။ ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်မှုကို ချိန်ညှိပါ။
ပထမအလွှာ အပူချိန် အလွန်နိမ့်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သော အပူချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါများ မပါပါက ပထမအလွှာ၏ မျဉ်းအကျယ်ကို တိုးမြှင့်ပါ။
El ကိုယ်လုံးတီး ၎င်းသည် resin printer များတွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပိုင်းအစ၏ မျက်နှာပြင်များမှ ပေါက်ထွက်သော အကြေးခွံများ သို့မဟုတ် အလျားလိုက် ပရိုဖိုင်များဖြစ်သည်။ အချို့သည် ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အပိုင်းအစမှ ခွဲထွက်သွားနိုင်ပြီး အချို့မှာ တွဲဆက်နေနိုင်သည်။ ကွဲသွားသော အရာများသည် အစေးကန်ထဲတွင် မျှောနိုင်ပြီး အခြားအလွှာများ ပျက်သွားစေသည်။ သင့်ဖြေရှင်းချက်သည် ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်-
အစေးကန်အတွင်း ပျက်စီးခြင်း၊ အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် တိမ်ထူခြင်း။ tank နှင့် filter resin ကို စစ်ဆေး/အစားထိုးပါ။
မော်ဒယ်၏ ညံ့ဖျင်းသော တိမ်းညွှတ်မှု သို့မဟုတ် သိပ်သည်းလွန်းသော ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် အစေးစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
ကြမ်းတမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖု
ပြီးသွားသော အပိုင်းများ ဖြင့် မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း။အရေးအကြောင်းများ၊ မညီမညာသော ညှပ်များ၊ ဤ resin ပရင်တာများ၏ ပြဿနာသည် အောက်ပါတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
over-compression ဟူသော ဝေါဟာရသည် အစေးဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်ကို ဖော်ပြသည်။ ဆောက်ပလပ်ဖောင်းနှင့် elastic အလွှာ (သို့) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဖလင်များကြားရှိ နေရာလွတ်သည် စေးတိုင်ကီ၏ နေရာလပ်ကို လျော့ပါးစေပြီး ဖြစ်ပေါ်စေသည် ။ ကနဦးအလွှာများသည် အလွန်ပါးလွှာသည်။ထို့ကြောင့် သူတို့သည် တုန်လှုပ်သွားဟန်တူသည်။ ၎င်းသည် အောက်ခြေမှ အပိုင်းကို ခွဲထုတ်ရန်၊ သို့မဟုတ် ပြားချပ်သော အောက်ခြေများနှင့် သာမန်ထက် ပိုတိုသော အစွန်းများကို ထားခဲ့ရန်လည်း ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် foil ၏နေရာချထားမှုကိုစစ်ဆေးပါ။
အစေး 3D ပရင်တာတွင် ကပ်ငြိမှု မရှိခြင်း။
ဘယ်အချိန်မှာ အထင်အမြင်များကို အခြေခံမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် လုံး၀ ကွဲကွာသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းသည် ကပ်တွယ်မှုပြဿနာရှိနေကြောင်း ဖော်ပြသည်။ တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်-
ကန်အောက်ခြေရှိ သန့်စင်ထားသော အစေးပြားတစ်ပြား (ကပ်ငြိမှုအပြည့်မရှိသော) ကို ဖယ်ရှားရမည်။
သင့်လျော်သော အခြေခံ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်မပါဘဲ ပရင့်ထုတ်ပါ။
ပထမအလွှာသည် အပိုင်း၏ အလေးချိန်ကို ထိန်းရန် သေးငယ်လွန်းသည်။
အစေးကန်အတွင်း ပျက်စီးခြင်း၊ အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် တိမ်ထူခြင်း။ ဇကာ၊ သန့်စင်ပါ၊ သို့မဟုတ် စေးပြောင်းပါ။
ပုံနှိပ်အခြေခံနှင့် အစေးကန်၏ မျှော့အလွှာ သို့မဟုတ် မျှော့ဖလင်ကြားတွင် အလွန်အကျွံ နေရာလွတ်များ။
ပုံနှိပ်စက်ပေါ်တွင် ပုံသဏ္ဌန်များ (အစေး 3D ပရင်တာ)
တစ်ခါတလေ ကြုံဖူးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပုံနှိပ်စက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံသဏ္ဌန်များ. အောက်ခြေတွင် တွဲထားသည့် ပုံစံတစ်ခု သို့မဟုတ် အလွှာတစ်ခုနှင့် ကျန်အလွှာသည် ပုံနှိပ်မထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွတ်ထွက်ပြီး အစေးကန်ထဲတွင် ရှိနေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စများတွင် အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများမှာ-
အညစ်အကြေးများ၊ အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်အမျိုးအစားအချို့ ညစ်ညမ်းနေသည့် အလင်းမျက်နှာပြင်များ။ ဤအမှုန်အမွှားများသည် အလင်းတန်းများကို ပိတ်ဆို့နိုင်သော်လည်း၊ ပထမအလွှာများသည် အများအားဖြင့် ပိုရှည်သော ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသောကြောင့် ဤပထမအလွှာသည် ကျန်အပိုင်းအစမဟုတ်ပဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု မှတ်သားထားပါ။
resin tank အတွင်းရှိ အပျက်အစီးများ၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် စိမ်းစိုခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အစေးကန်၏ acrylic ပြတင်းပေါက်၏အခြေအနေကိုလည်းစစ်ဆေးပါ။
ပြီးတော့ အဓိက ကြေးမုံ။
အဆင့်လိုက်ဝက်အူသည် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
အခြေခံအဆင့်ကို မြင့်တင်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒါကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ချိန်ညှိဝက်အူသည် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ၎င်း၏ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ Z axis stroke ၏အဆုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောဝက်အူကို ဝက်အူဖြုတ်ခြင်းဖြင့် ခရီးသွားအချို့ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နော်ဇယ်သည် ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျပြီး ကွဲသွားနိုင်သောကြောင့် အောက်ခံကို မှန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားလျှင် သတိထားပါ။
3D ပရင်တာ အမှားကုဒ်များကို ဘာသာပြန်ပါ။
မင်းတွေ့ရင် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမှားကုဒ် ပရင်တာ၏ LCD သည် ပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ရန် လုံလောက်သောဒေတာကို မပေးနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်တစ်ခုစီတွင် မတူညီသော အမှားကုဒ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုဒ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရန် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းကဏ္ဍတွင် သင့်မော်ဒယ်၏လက်စွဲစာအုပ်ကို ဖတ်ရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » 3D ပရင်တာ အပိုပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်း။